Mareykanka oo lagu eedeeysay in uu dhibaato ka geystay Soomaaliya | goboladaradio.com	Sunday, May 26th, 2013	Home
Mareykanka oo lagu eedeeysay in uu dhibaato ka geystay Soomaaliya
Published on July 25, 2012 by admin · No Comments Published on July 25, 2012 (MUQDISHO GRN):-QM ayaa ku eedeysay in diyaarado ay leedahay dowlada Mareykanka ay dhibaato ku hayaan dhulka Soomaaliya.
War ay soo saareen guddi gaar ah oo Q,M ka tirsan ayaa lagu sheegay in diyaaradaha dagaalka ee kaligood is wada ee Maraykanku leeyahay ay carqalad ku noqdeen hawada Soomaaliya isla markaana ay qal qaliyeen diyaaradaha kale ee isticmaala hawada Soomaaliya.
Warbixinta ayaa lagu xusay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Maraykanka si aan kala joogsi laheyn u maraan guud ahaan hawada Soomaaliya gaar ahaan gobolada ay hadda gacanta ku hayaan Xarakadda Al-Shabab.
Wargeyska warbixintaan qoray ee Washington Post waxaa uu ku waramayaa in tirada diyaaradaahaan oo batay ay xataa keentay in mid ka mid ah ay Muqdisho kusoo dhacdo.
Gudigaan Q,M ka tirsan ee warbixintaan diyaariyay oo sheegay inay muddo baaritaan ku hayeen arrintaan waxay xuseen inay aad u kordheen diyaaradaha kaligood iswada ee Maraykanku hawada Soomaaliya ku soo firdhiyay.